I-ETNews incokola malunga ne-5,4 encinci kunye ne-6,7 "ye-iPhone | IPhone iindaba
I-ETNews ithetha nge-iPhone ye-5,4 ″ kunye nenye ye-6,7 ″ ebhityileyo
ETNews Ithi loo nto ukubhitya kuya kubakho ngenxa yeepaneli eziza kunyusa ii-iPhones ze-2020 ze-5,4 intshi kunye nee-intshi ze-6,7. Kubonakala ngathi ezi zikrini ze-OLED ziya kunyuswa kwii-iPhones zonyaka olandelayo iipaneli eziguqukayo ezibizwa ngokuba yi «Y-OCTA», Itekhnoloji entsha ekuvumela ukuba wongeze ulawulo lokuchukumisa ngaphandle kwepaneli ngokwayo ngaphandle kwemfuneko yomaleko owahlukileyo, obenza ukuba batyeke xa bebonke.
Kucace gca ukuba inde indlela ekusafuneka ihanjwe yinkampani yeCupertino ukusinika ezi modeli zintsha ze-iPhone, kodwa kuyacaca ukuba kudala besebenza kuzo kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba ukuvuza okuthile kusinde emfihlakalweni bafuna ukukhuthaza kwinkampani. Ngokwengxelo le Imodeli ye-6,1-intshi ye-iPhone kuphela eya kuvela kwisandla se-LG Display, Ke ngoko iya kushiywa ngaphandle kule teknoloji yeepaneli zokubonisa ze-Samsung.
Iifowuni ze2020 ezineeChipcomm X55 chips ze5G
Ngaphandle kwamahemuhemu malunga ukumiliselwa kwetekhnoloji ye5G Kwi-iPhone entsha kunyaka olandelayo onke amarhe kunye nokuvuza kuqhelekile kunokuba "yinto eqhelekileyo" kwimveliso ekulindeleke ukuba ifumane iindaba ezininzi kunye notshintsho. Kuyinyani ukuba kukho intetho yekhamera yeToF, ukufika okunokwenzeka koyilo olufana ngakumbi ne-iPhone 4/5, esele ikho ngaphezu kwezibuko le-USB C, i-ID yeTouch enokwenzeka phantsi kwescreen okanye notshintsho lwangaphakathi izinto, kodwa eli nqaku kwiscreen sitsha kumarhe okusila axhonywe ngaphezulu kwezi zixhobo kwaye ke yinto ekufuneka igcinwe engqondweni.
Iphaneli encinci inokuba lolunye ukhetho lokongeza ibhetri enkulu kwaye iyile uyilo olunciphileyo ngaphandle kokuqhubeka. Khumbula ukuba ubukhulu beemodeli zangoku zi-0,81 mm kwi-iPhone 11 Pro kunye ne-0,83 mm kwi-iPhone 11, enokuncitshiswa kwisizukulwana esilandelayo ukuba la marhe ayinyani. Kubonakala kucacile ukuba ewe, ukuba siza kuba neemodeli ezintathu ze-iPhone kunyaka olandelayo, enye i-intshi eyi-5,4, enye i-6,1-intshi, kunye no-6,7-intshi enye Siza kubona ukuba kuyinyani na kwezi iiphaneli ezintsha ezibhityileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-ETNews ithetha nge-iPhone ye-5,4 ″ kunye nenye ye-6,7 ″ ebhityileyo
Imfuno ephezulu ye-AirPods Pro inokuphinda kabini imveliso